ကျနော့်အတွက်အမှတ်တရများစွာထဲ က ဒီနေ့ ၂၂.၀၈.၂၀၁၀ ဟာ လည်း အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ...။
အဲ့ဒီ့အတွက် အခုပို့စ်လေး ကိုတင်ဖြစ်တယ်.
Posted by AZURE at 8/22/20100comments
မနေ့က၀ါဆိုလပြည့်ည (ဓမ္မစကြာနေ့)မှာ ရောက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေး တွေ ကို အမှတ်တရတင်လိုက်တယ်..။ ဓမ္မစကြာရွတ်ဖြစ်တယ်..။ ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်လို့ လား မသိဘူး..။ လူသိပ်မများလှဘူး..။ ဘုန်းကြီး ကျောင်း ကို ရောက်တော့.. စရွတ်ကာစပဲ ရှိသေး တာမို့ တော်သေးတယ်..။ အခု ဘုရားဆင်းတုတော်တွေသီတင်း သုံး တဲ့ အထပ် မှာ တော့ ရွတ် နေ တဲ့ သူ တွေ ပြည့် နေ တာ မို့လို အပေါ်ဆုံးထပ် ကိုပဲ တတ်လာခဲ့တယ်..။ အပေါ်ဆုံးထပ် မှာ တော့ နေရာ ရတယ်..။ အရမ်းသပ္ပါယ်ဖို့ ကောင်း တာမို့ အခု လိုပုံ လေး တွေ ရိုက်ဖြစ် လာခဲ့တယ်..။ နောက်ပီး တော့.. အောက်ဆုံးထပ် မှာ တိုက်တဲ့ လက်ဖက်ရည် (တကယ့် ကိုမြန်မာ့လက်ဖက်ရည် အရသာ ) ကို ၂ခွက် သောက်ပစ်လိုက်တယ်..။ နောက်ပီး တော့ ရွှေတောင်မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ စားတယ်..။ ဆရာ တော် က ခဏ နေ မှ အပူဇော်ခံ တာ နဲ့ ၀တ္ထုကပ်..၊ဦးချပြီး ပြန် လာ ခဲ့ တယ်..။
Posted by AZURE at 7/27/20100comments
ဆရာကြီးမင်းဆွေ ရေးတဲ့ ဓား ဆိုတဲ့ စာအုပ် ထဲ က စာသားလေးတချို့ကြိုက် လို့ အခုပို့စ်မှာ တင်လိုက်တယ်..။ ရွှေအမြုတေ မှာဖတ်ရလို့ အဲ့ဒီ့စာသားလေးကို ပြန်သတိရလာ တာ..။
“ငါ့မှာ တာဝန်များစွာ ကျန်သေးသည်။ ကုန်းပေါ်မှာ သေသေ၊ ရေထဲမှာ နေနေ၊ လေထဲမှာ ကြေကြေ၊ အထွတ်အထိပ်တွင် ငါနေမည်။ လာမည့် ဘေးပြေးမရှောင်၊ တွေ့အောင် ငါသွားမည်။ အိမ်သူကို ဧည့်သည် မစော်ကားရ။ ရန်သူကို ကလဲ့စားချေ။ အာမဘန္တေ”
ဆရာကြီး မင်းဆွေ၏ ဒါး(ဓား) ၀တ္ထုထဲက ဇာတ်ဆောင် မျိုးမြင့်ရန်နောင်ရဲ့ ဘုရားရှိခိုး အဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးမြင့်ရန်နောင်ဟာ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ မင်းကြီး ရန်နောင်ရဲ့ မျိုးဆက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယိမ်းနွဲ့ပါး အနွယ်ဝင် ဓားတစ်လက်ကို ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားတယ်။ သူဟာ မဟုတ်မခံစိတ် ရှိသူ၊ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်း ထန်သူ၊ ဗြိတိသျှ အစိုးရကို တော်လှန် ပုန်ကန်ဖို့ အမြဲ ကြံစည်နေသူ ဖြစ်တယ်။ သူနဲ့ ပြိုင်ဘက် မြဒင်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် အလိုတော်ရိ၊ ပြီးတော့ မြင်မြင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး။ ဒီသုံးယောက်ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းကို နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရောယှက် ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ဆောင်ဟာ တစ်ကိုယ်တော် ၀ါဒီ တစ်ယောက်လို့ ဝေဖန်ကြတာမျိုး ရှိပေမယ့် အဲဒီ ကာလတုန်းကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ စံပြဇာတ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တွေကို သတ္တိရှိဖို့၊ သစ္စာရှိဖို့၊ စာရိတ္တခိုင်မာဖို့၊ မျိုးချစ်စိတ် ရှိဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ထွက်လာချိန်ဟာ ဂျပန်ခေတ်ဖြစ် တာကြောင့် ဖက်ဆစ်စနစ်ကို မုန်းတီးနေတဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ “အိမ်သူ (အိမ်ရှင်)ကို ဧည့်သည် မစော်ကားရ၊ ရန်သူကို ကလဲ့စားချေ။ အာမဘန္တေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ခေတ်စားနေခဲ့ ပါတယ်။ လူငယ် တော်တော်များများဟာ ဒီစကားလုံးတွေကို အလွတ် ကျက်ပြီး ကြွေးကြော်သံလို ရွတ်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(ဆရာအောင်သင်းတောင် အဲဒီ စာပုဒ်ကို အလွတ်မှတ်မိ နေပြီး ဟောပြောပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ရွတ်ဆိုပြတတ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါ တယ်) ဒီစာအုပ်ဟာ ဂျပန်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာ အသင်းက ပထမဆုံး အကြိမ် ချီးမြှင့်တဲ့ စာပေဆု (ငွေကျပ် ၁၀၀၀) ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီး မင်းဆွေမှာ စိတ်ထိခိုက် လွယ်တဲ့ ဝေဒနာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ဝေဒနာမျိုး ကတော့ အနုပညာသမား စစ်စစ်တိုင်း လိုလိုမှာ အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိတတ်ကြတာ ပါပဲ။ ဆရာကြီး ကတော့ နည်းနည်း ပိုပြင်းထန်သလား မသိ။ အဲဒီ အကျိုးဆက် ကြောင့်ပဲ ထင်ရဲ့။ ၁၉၄၉ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နေ့မှာ အိမ်ကနေ ထွက်သွားရာက လုံးဝ ပြန်မလာ တော့ဘဲ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တာ ဒီနေ့ အထိပါပဲ။
ဓားဝတ္ထုကို အသံတိတ်ခေတ်က မင်းသား ကျော်အေးနဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အသံထွက် ခေတ်မှာ စိုးရွှေနဲ့ ပြန်လည် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယို ခေတ်မှာလည်း ကျော်သူ ခေါင်းဆောင်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဆရာကြီးမင်းဆွေဟာ ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်တဲ့ အတွက် အခု ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၈ မှာ အသက် ၁၀၀ ပြည့်ပြီ ဖြစ်လို့ ဂုဏ်ပြု ညွှန်းဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
အခုစာသားတွေက ရွှေအမြုတေ စာမျက်နှာမှာပါတာတွေကို တင်ခြင်းသက်သက်ဖြစ်တယ်..။
Posted by AZURE at 7/05/20100comments
Linux Mint ဆိုတာထွက်တယ်..။ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ အခုဒေါင်းလုတ်ချထားလိုက်တယ်..။Ubuntu 10.04 ကိုအခြေခံထားတယ်တဲ့..။ သုံးကြည့်ပီးမှ ပို့စ်ထပ်တင်မယ်..။လင်းနပ် ကို စသုံးမယ့်သူတွေအတွက် လွယ်တယ်ပြောတယ်..။
The above photo is my installed Linux Mint9 Isadora screenshot.
I haven't installed the Myanmar font yet.
Posted by AZURE at 6/18/20100comments
THE LEGEND OF KING NERASUAN
ဒီနေ့..အမေနေ့ တဲ့.. ။အမေ့ ဆီဖုန်း ဆက်တာ တိုက်ရိုက်ခေါ် တော့ လည်း ဖုန်း မကိုင် ဘူး..။ ကဒ်နဲ့ ခေါ် တော့ လည်း မရ ဘူး..။ အိမ် က ဖုန်း က တခါတလေ.. အဲ့ လို ပဲ.. ဒီကခေါ်ရင် ဖုန်းမြည်နေ တယ်လို့ ထင် ရ ပေမယ့်.. တကယ့် ဟိုဖက် မှာ တော့မြည်ချင်မှမြည်တာ..။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. အမေနေ့ ဆိုပေမယ့်.. အဖေ့ ကို ကော..၊အမေ့ ကို ကော.. သတိရပါတယ်..။
လက်ဖက်စားပီးအိပ်မရ ဘူးဖြစ် နေတယ်..။ အခု လောလောဆယ်..လှိုင်းစီးရင်း နဲ့..စိတ်ဝင်စား တာလေးတွေလိုက်ဖတ်ဖြစ်နေတယ်..။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ၀ါသနာမပါပေမယ့်နရစွမ် အကြောင်းရိုက်ထား တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား တွေ့ တာ နဲ့ အင်တာနက်ဒေါင်းလုတ်မန်နေဂျာနဲ့ ချထားလိုက်တယ်..။ ထိုင်း ကရိုက်တာ..။ သူတို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာ အခမ်းနားဆုံး..အကုန်အကျအများဆုံးလို့ ဆို တယ်..။ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်..ယိုးဒယား က နရစွမ်မင်းသား ကို ဟံသာဝတီကိုခေါ်လာပြီး.. နရစွမ်မင်းသား က ပြန်လည် တော်လှန် တဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ထား တာ..။ အသေးစိတ် ကို ဖတ်ချင်ရင်တော့.. ဒီမှာ... သွားဖတ်လို့ရတယ်..။ အဲ့ မှာ တော့ တော်တော်စုံစုံလင်လင်ကို ရေး ပေး ထား တာ ကို တွေ့ရတယ်..။
Posted by AZURE at 5/09/20100comments
ဘလော့ခ် မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေတာနဲ့ သတိရတုန်းလေးပြန်ရေးဖြစ်တယ်.. ။ မရေးဖြစ်ပေမယ့်ဖတ်နေကျဘလော့ခ်လေးတွေကို တော့ သွားဖတ်ဖြစ်တယ်..။ အခုနောက်ပိုင်း ဖတ်စရာ မြန်မာ ဘလော့ခ်တွေတော်တော်များလာတာကို သတိထားမိတယ်..။ ဘလော့တစ်ခုဆိုတာကလည်း ဖတ်တဲ့သူ ရှိမှ ပို ပြီး အသက်ဝင်မှာလေ..။ အခုလိုမျိုး နှစ်လ နေ မှ တစ်ခါ တောင် မတင်ဖြစ်တဲ့ဘလော့ ကို ဘယ်သူက လာဖတ် ပါ့ မလဲ... ။ အခု လောလောဆယ်လုပ်ဖြစ် နေ တာ က.. Ubuntu 10.04 ကို စမ်းသုံးကြည့်နေ တယ်..။ အခု ပို့စ်ကို လည်း ဇော်ဂျီဖွန့် နဲ့ ဇော်ဂျီ လက်ကွက် တင်လို့ ရ တာ နဲ့ စမ်းရင်း နဲ့ တင်လိုက် တာ လည်း ပါတယ်..။
Ubuntu 10.04 မှာအရင် က နဲ့မတူ တာ က.. Close , Maximize , Minimize ခလုတ်တွေ က ဘယ်ဖက် ကို ရောက် ကုန် တာ..။ အခု တော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ပဲ ညာဖက် ကို ပြန်ပို့ ထား တယ်..။ မသုံး တတ် လို့..။ TouchScreen support လုပ်တယ်လို့ဖတ်ဖူး ပေမယ့် အခု ကွန်ပြူတာ လေး က support မလုပ်တာ နဲ့ စမ်းလို့ မရ ဘူး ပေါ့..။ နောက်ပီး တင် ထား တာ က လည်း Virtual Machine နဲ့ တင် ထား တာဆို တော့လည်း..ကိုယ်စမ်းချင်တာလေး တွေ ကိုအတောသတ်ထားလိုက်တယ်..။
Posted by AZURE at 5/08/20100comments
သေသေချာချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး..။4-th Year လောက်တုန်းက Field ဆင်းရတော့..ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံကိုဆင်းရတယ်..။ ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တစ်ခု တည်း တင်မဟုတ်ပဲ.. ကျောက်ဆည်စက်မှုဇုန် မှာ ရှိ တဲ့ တခြားစက်ရုံ တွေကို ပါသွားရတယ်..။ ကျောက်ဆည် မှာ ဆွေမျိုး တစ် ယောက်ရှိ တော့ သူတို့ ဆီက အကူအညီ ရတဲ့အခါ တွေလည်း ရခဲ့ တယ်..။ သူတို့အိမ် မှာ တစ်ခါတစ်လေ.. ထမင်းဖိတ်ကျွေးလို့ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ အားမနာ ပါး မနာ သွားစား ခဲ့ ဖူး တာလည်း ရှိ တယ်...။ နွားထိုး တို့လည်း အပါအ၀င်ပေါ့..။ အဲ့ဒီ့တုန်း က ပထမဆုံး ထမင်း ဖိတ်ကျွေး တော့.. ချက် ထား တဲ့ ဟင်းတွေ က လည်း နည်း တာ မဟုတ် ဘူး..။ နို့ခဲချက် ၊ ကြက်၊ ၀က် နဲ့ တခြားခြား ဟင်းအတိုအထွာလေး တွေ က လည်း နည်း တာ မဟုတ် ဘူး..။ အန်တီမာ က လည်း ဟင်းချက် တာ ကလည်း တော်တော် ကောင်းတာလေ..။ အခုအချိန် အထိ အန်တီမာ့ ဟင်းဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံတိုင်း စကားစပ်မိ တိုင်း သတိရ နေ သေး တယ်..။ အဲ့ဒီ့ တုန်း က အန်တီမာ ချက် တဲ့ ဟင်းတွေ ထဲ မှာ ၀က်သားအချိုချက် တာကို တော်တော်လေး သဘောကျခဲ့ တယ်..။ တော်တော်လေးစားကောင်းလို့ အခုအချိန်အထိ အမှတ် ရ နေ ခဲ့ တယ်..။ ဘယ်လို ပြော ရ မှန်း ကို မသိ ပေမယ့် မမေ့နိုင် တဲ့ ဟင်းလျာတွေထဲ မှာ တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့ တယ်လို့ ပြော ရင် လွန်လေမလား မသိ ပါဘူး..။ အဲ.. အခု လည်း ကျွန့်တော့်အတွက် နောက်ထပ် အမှတ် ရ နေ မယ့် ၀က်သား ဟင်းလေး တစ်ခွက် ကြောင့် အခု လို အမှတ် တရ တွေကိုပြန် ရေး မိ တာ..။အခု လို အစားအသောက်နဲ့ပတ်သတ်ပီး တစ်ခါမှ မရေးဖူးပေမယ့် (အရင်တုန်း က blogging လုပ်တုန်းက လည်း မရေးဖူး ဘူး)..အခု တစ်ခါ မှာတော့ အမှတ် တရ ၀က်သားဟင်း တွေ ထဲ မှာ တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ် တဲ့ အခု ၀က်သားဟင်းလေးတစ်ခွက် ကို.. အမှတ် တရ အဖြစ် အခုပို့စ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by AZURE at 2/19/20100comments
Labels: inspiration, Nostalgia, တွေး မိ တွေး ရာ လေး များ
Love is..... (1)
စာသင် သားဘ၀၊ တို လီ မှတ်စ များ (1)
တွေး မိ တွေး ရာ လေး များ (7)
တွေး မိ တွေး ရာ လေး များ၊ (1)
ကျွန် တော် သွား နေ ကျ နေ ရာ လေး များ
1-A Light of Danmma
programmer (or) tzm
ခွန် မိုး ကျော်
ကျွန် တော့် ပတ် ၀န်း ကျင် မှ ဘလော့ခ် များ
ဒဂုံ-(၁) မှ Kသူရိန်
အိမ် လေး တစ် လုံး